धुर्मुस सुन्तलीलाई यस्तो डर ! पत्रकारकै अगाडी धुर्मुस-सुन्तलीले पोखे यस्तो दुख ( भिडियो ) - Nepal Insider
Home/राशिफल/धुर्मुस सुन्तलीलाई यस्तो डर ! पत्रकारकै अगाडी धुर्मुस-सुन्तलीले पोखे यस्तो दुख ( भिडियो )
धुर्मुस सुन्तलीलाई यस्तो डर ! पत्रकारकै अगाडी धुर्मुस-सुन्तलीले पोखे यस्तो दुख ( भिडियो )
धुर्मुस सुन्तलीले निर्माण गर्दै गरेको रंगशाला माथि डोजर चलाएपछि दुख पोख्दै आफ्नो आपत्ति जनाउदै मिडियामा बोलेका छन्। देशका लागि अन्तरास्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउनका लागि मरिमेटेर लागि परेका धुर्मुसलाइ केहि अराजक तत्वले दुख दिएर रुवाउने काम गरेका छन्। धुर्मुस सुन्तली ले निर्माण गर्दै गरेको गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय रंगशाला स्थानियले डोजर लगाएर भत्काएपछि धुर्मुसले निकै दुखित हुदै प्रस्तुत भएका छन्। आफुले देख्दा देख्दै पनि केही गर्न नसकेको बताएका छन् ।
बिदेशमा बसेर काम गरेर पैसा पठाएका नेपाली दाजुभाइको पैसाले लगाएको बारमा माथि डोजर चलाएको हो। जसले जस्तो बार ढलाए उनीहरुले नै त्यो बार लगाउनु पर्ने सुन्तली ले बताए। डोजर लगाउन नेतृत्व गर्ने प्रकाश कडेल लाइ नेकपाले सदस्यता बाट समेत निलम्बित गरिसकेको छ। डोजरले जस्तापाताको बार हैन हामी नेपालीको मन भत्काउन लगाईएको धुर्मुसले बताए। बुधबार विहान डोजरसहित आएका केही व्यक्तिले बार भत्काइदिएका थिए । यस भन्दा अघि पनि धुर्मुस ले धेरै पटक डर धम्कि सहदै काम गर्दै आएको भनि भिडियो मार्फत आफ्नो दुख पोखेका छन्।
आफुले रात दिन नभनी देशका लागि काम गरिरहदा सहयोगको साटो यसरि दुख दिने काम हुनु भनेको दुखदायी भएको भन्दै दुख पोखेका छन्। आफ्नो सबैकुरा त्यागेर देशका लागि काम गरिरहदा सहयोग पनि मिल्यो तर देशका लागि पनि केहि गर्न पर्छ देशका लागि पनि काम गर्नु पर्छ भन्ने मानिसहरु बिरलै पाइएको मा दुखि बने। केहि अराजक तत्वका कारण आफ्नै आखा अगाडी रंगशाला निर्माण स्थलमा भएको घटनालाई निकै दुखदायी र कारुणिक घटनाको संज्ञा दिएका छन्।
भिडियो मा हेर्नुस
साम्राज्ञिका तस्विरले रंङ्गमञ्च र सामाजिक सञ्जाल तात्यो !
बुधबार पनि सुनले कायम गर्यो अर्को नयाँ रेकर्ड, कतिमा कारोबार हुँदैछ ?
“दुई झापड लगाइदिनुस प्रधानमन्त्रीज्यु मलाई कान्ति अस्पतालको बिजोग हेर्दा आँसु आएन भने”- रबि लामिछाने